Sucuudiga oo Iska fogeeyey iney duqeyn ku dileen 42 qof oo Qaxooti Soomaali ah | SAHAN ONLINE
Sucuudiga oo Iska fogeeyey iney duqeyn ku dileen 42 qof oo Qaxooti Soomaali ah
Gen Axmed Al-Assiri
Isbahaysiga uu hoggaamiyo Sucuudigu ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa iska fogeeyey in mid kamid ah diyaaradahoodu qaadeen weerarkii lagu dilay dad ka badan 32 qof oo qaxooti Soomaali ah oo saarnaa doon maraysay xeebaha dalkaas.
Afhayeenka Isbahaysiga Gen Axmed Al-Assiri ayaa ka hadlay duqeynta,wuxuu sheegay in diyaaradaha Sucuudigu aysan ku lug lahayn duqeyntaas isla markaana aysan ka dagaalamin goobta ay duqeynta ka dhacday.
Al-Xasan Qaleb oo tahriibiye Yemeni ah oo ka badbaaday weerarkaas ayaa sheegay in doonida ay siday tahriibayaal Soomaali ah oo ay ku jiraan haween iyo carruur kuwaasoo kusii jeeday dalka Suudaan.
Waxa uu sheegay in doonidu ka shiraacatay xeebta Ras arra ee xeebta koonfureed ee gobolka Xudayda ee dalka Yemen xili ay ku sugnaayeen meel 50km u jirta xeebta oo ku dhow marina babul mandeb markii duqeyntu dhacaysay.
Hay’adda IOM ayaa xaqiijisay in tirada dhimashada ay marayso 42 qof ,waxayna weerarkan ku tilmaamtay mid aan la aqbali karin loona baahan yahay in la hubby cidda saaran doonyaha inta aan la weerarin.
Qaxootiga la layer iyo kuwa ka badbaaday ayaa haystay aqoonsiga qaxootinimo ee UN-ka sida ay sheegtay hay’adda socdaalka caalamiga ah ee IMO.